ဘလူးတုသ်ပျံ့အိတ်ဆောင်ပျံ့, တရုတ်ကိုအတွက် Bluetooth ရေနံပျံ့ထုတ်လုပ်သူ
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:ဘလူးတုသ်ပျံ့,အိတ်ဆောင်ပျံ့,ဘလူးတုသ်ရေနံပျံ့,ဘလူးတုသ်အနံ့ပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဘလူးတုသ်ပျံ့
ဘလူးတုသ်ပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဘလူးတုသ်ပျံ့, အိတ်ဆောင်ပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဘလူးတုသ်ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အပန်းဖြေမှု၏ဂီတဘဝနှင့်အတူ Aroma Diffuser စပီကာ
နောက်ဆုံးပေါ်ဘလူးတုသ်နာယက Ultrasonic ရေနံအနံ့ပျံ့ Black က
Cap 300ml ဘလူးတုသ်ဂီတရေနံပျံ့ Threading
ဘလူးတုသ်အတူ Ultrasonic ရနံ့ကုထုံကြိုင်ပျံ့
ရေ Drop မရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ဘလူးတုသ်
ဘလူးတုသ်နာယကနှင့်အတူရေ Drop မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့
လေအေးပေးစက် Led ညအလင်းအိတ်ဆောင်အနံ့ပျံ့
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့နာယက [ဘလူးတုသ်နာယက Insert]: အကြိုက်ဆုံးဂီတသို့မဟုတ်အော်ဒီယိုစာအုပ်များ၏သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရင်းကစားရန်စမတ် Bluetooth ကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုသုံးသည်။ ယောဂ, တှေးတောဆငျခွသို့မဟုတ် Ambient ဂီတအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံး Set-up...
အပန်းဖြေမှု၏ဂီတဘဝနှင့်အတူ Aroma Diffuser စပီကာ Ultrasonic humidifier သည်လေကိုစိုစေပြီးနှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသည်းယားခြင်း၊ နှာခေါင်းသွေးထွက်ခြင်းနှင့်ခြောက်သွေ့သောအရေပြားစသည့်ချောင်းဆိုးခြင်း၊ Air humidifier သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ (သီးခြားစီရောင်းချခြင်း) နှင့်အရောင်ပြောင်းသော...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 13.39 - 15.08 / Piece/Pieces
အနံ့ပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံဘလူးတုသ်နာယက 200ml ဤသည် Dituo ultrasonic ပျံ့တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဘက်စုံသုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ရနံ့ကုထုံအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအပြင်, ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့လည်းတစ်ခုလေကောင်းလေသန့်ရှင်းစေသောနှင့်လေကြောင်း humidifier အဖြစ်လည်ပတ်သော။ , သင့် home`s...
နောက်ဆုံးပေါ်ဘလူးတုသ်နာယက Ultrasonic ရေနံအနံ့ပျံ့ Black က နည်းပညာ Dituo ဘလူးတုသ်ပျံ့နှင့်အတူတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အားလုံးတပြိုင်နက်ရနံ့ကုထုံ, ဂီတ, နှင့်တည်ငြိမ်ပြီးပွော့ illumination စေချင်သလား? ထိုအခါဆန်းသစ် Bluetooth ကိုရေနံပျံ့နှင့်သင်၏အာကာသ sensify ။...
Cap 300ml ဘလူးတုသ်ဂီတရေနံပျံ့ Threading သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းနားထောင်နှင့်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးသင်အကြိုက်ဆုံးရနံ့နှင့်ပြည့်စုံရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ်ဖြစ်လျှင်ဤသင်တို့အဘို့ဘလူးတုသ်ပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသံအရည်အသွေးနှင့်အတူတစ်ဦးကဘလူးတုသ်ပီ။ သငျသညျအပြည့်အဝထိန်းချုပ်မှုများအတွက် app ကို download...
ဘလူးတုသ်အတူ Ultrasonic ရနံ့ကုထုံကြိုင်ပျံ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ State-Of-The-Art ဘလူးတုသ်ပျံ့နှင့်အတူအပန်းဖြေလေထုကိုဖန်တီးပါ။ ဘလူးတုသ်အနံ့ပျံ့သင်ဖြစ်နိုင်သည်ဂီတပြဇာတ်များအတွက်ဘလူးတုသ်နည်းပညာ featuring လိုအပ်နိုင်အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ အဆင်းလှသောသဘာဝကသစ်သားစပါးကိုရှု7အရောင် LED မီးလုံး featuring ။...
ရေ Drop မရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ဘလူးတုသ် Dituo ဘလူးတုသ်ပျံ့သင်အရှိဆုံးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ယင်း၏ချောမွေ့ပြောင်လက်နှင့်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခု State-Of-အနုပညာကဘလူးတုသ်နည်းပညာအားကမ်းလှမ်းစဉ်ဤခရီးဆောင်ပျံ့, လွတ်လပ်စွာရပ်တည်။ အဆိုပါ Dituo ဘလူးတုသ်™မျှမကြွင်းသောနောက်ကွယ်မှစွန့်ခွာသောလေထုထဲသို့...
ဘလူးတုသ်နာယကနှင့်အတူရေ Drop မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ သုံး-In-One ဘလူးတုသ်ပျံ့: သုံး-In-One ၏ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုစပီကာရနံ့ကုထုံ humidification အလင်း။ တမူထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်း Ultrasonic ပျံ့: ထုတ်ကုန်ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ခုအဆင်တန်ဆာ, ရုံး / home / ယောဂ / spa / အိပ်ခန်း / ကလေးအခန်းခရီးဆောင်။...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.77 - 14.15 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ် bax နှင့်မာစတာစက္ဏူထူ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဘလူးတုသ်နာယကရနံ့ကုထုံကြိုင်ပျံ့ built-in Bluetooth ကိုဂီတ Player ကို: အဆိုပါထုတ်ကုန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်စပီကာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘလူးတုသ်အနံ့ပျံ့ဘလူးတုသ်နည်းပညာချမှတ်နှင့်ဖုန်း, မှတ်စုစာအုပ်နှင့်အခြား devices များနှင့်အတူတွဲဖက်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ 7-အရောင်ကို LED Mood အလင်း:...
လေအေးပေးစက် Led ညအလင်းအိတ်ဆောင်အနံ့ပျံ့ 1 ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာအတွက် 5: မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ဘလူးတုသ်စပီကာ, LED စိတ်ဓါတ်များအလင်း, တဦးတည်းအတွက်အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier နဲ့ Desktop အလှဆင်လည်းသီးခြားစီသုံးနိုငျပေါင်းစပ်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘလူးတုသ်နာယကပျံ့: နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုချမှတ်,...
120ml လျှပ်စစ်အနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ရနံ့ကုထုံ ဂီတကစားသမား: အရည်အသွေးကောင်းဘလူးတုသ်စပီကာ, ဂီတနှင့်အတူ ultrasonic ပျံ့နှင့်အတူဘလူးတုသ်ပျံ့သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကိုခန်း, အိပ်ခန်း, spa နှင့်ရုံးခန်းများတွင်ရနံ့ကုထုံဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ချိန်ညှိနဲ့ LED အလင်း: သင်နှစ်ခု mode ကိုအကြား7အရောင်များအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်: တည်ငြိမ်အပေါ် /...
အကောင်းဆုံးက Ultra Sonic Humidifier အနံ့ပျံ့ဘလူးတုသ် built-in Bluetooth ကိုဂီတ Player ကို: အဆိုပါထုတ်ကုန်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု 300mm ကြီးမားသော-အချင်းစပီကာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘလူးတုသ်ပျံ့ဘလူးတုသ်နည်းပညာချမှတ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမိုဘိုင်းဖုန်းများ, တက်ဘလက်, မှတ်စုစာအုပ်နှင့်စျေးကွက်ရှိအခြား devices...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 13.85 - 15.39 / Piece/Pieces
လျှပ်စစ်အမွှေးအကြိုင်အနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံဘလူးတုသ်ပျံ့ ဘလူးတုသ်စပီ: ဘုံဘလူးတုသ်-enabled devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, ချက်ချင်းပင်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ချိတ်ဆက်ပါ။ ရနံ့ကုထုံ: တိုင်းအခိုက်အကိုက်ညီသောရနံ့ကုထုံအတှေ့အကွုံအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့်အတူ Dituo ဘလူးတုသ်ပျံ့ကိုအသုံးပြုပါ။7sooth နဲ့...
လျှပ်စစ်မူလစာမျက်နှာအနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ဂီတ ဂီတကစားသမား: အရည်အသွေးကောင်းဘလူးတုသ်စပီကာ, ဂီတနှင့်အတူသစ်သားပျံ့နှင့်အတူဘလူးတုသ်ပျံ့သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကိုခန်း, အိပ်ခန်း, spa နှင့်ရုံးခန်းများတွင်ရနံ့ကုထုံဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ်: ultrasonic နည်းပညာချမှတ်ကြောင့်နှောင့်အယှက်ဆူညံသံမပါဘဲတိတ်တဆိတ်ပွော့အမွှေးအကြိုင်...
လျှပ်စစ်ရနံ့ကုထုံရေနံဘလူးတုသ်နာယကပျံ့ Dituo ဘလူးတုသ်ပျံ့: အိပ်ခန်း, ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ပင်အလုပ်ခွင် cubicles မှစိုထိုင်းသောဖြည့်စွက်အဘို့စံပြ BLUETOOTH တေးဂီတ speaker တပ်ဆင်ထားပြီး Update ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီပျံ့, ။ ; ဒီစတိုင်အေးမြသောအခိုးအငွေ့ ultrasonic ပျံ့စိုဓာတ်ကိုဖြည့်စွက်နှင့်သင့်ခြောက်သွေ့သောအရေပြား,...
အမွှေးအကြိုင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဘလူးတုသ် 300ml ဘလူးတုသ်စပီ: ဘုံဘလူးတုသ်-enabled devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, ချက်ချင်းပင်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ချိတ်ဆက်ပါ။ ရနံ့ကုထုံပျံ့: အကောင်းဆုံးသင်၏ကျန်းမာရေးအဘို့, တစ်အနံ့-ကုထုံးအတွေ့အကြုံအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူ ultrasonic ပျံ့ကိုအသုံးပြုပါ။...
တရုတ်နိုင်ငံ ဘလူးတုသ်ပျံ့ ပေးသွင်း
မြို့ Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားများတွင်စည်ကား, မိုးသည်းထန်စွာအလုပ်နှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်, လူတွေ, စိတ်ဖိစီးမှုမှသက်သာရာရစေရန်ကိရိယာအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဘလူးတုသ်ပျံ့သက်သာရာဖို့နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်ရန်စတင်တဖြည်းဖြည်းဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုလူ၏လယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ရနံ့ကုထုံစက်တွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်ဦးတိုးတက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်နှင့် Dituo အသိဉာဏ်ဘလူးတုသ်အနံ့ပျံ့ကျယ်ပြန့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့နှင့်၎င်း၏ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့စားသုံးသူတွေချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့် Dituo ရဲ့စမတ်ဂီတရနံ့ကုထုံပျံ့ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကထောက်ခံသလဲ?
သင်သည်ဤဘလူးတုသ်ရေနံပျံ့တွေ့ကြုံခံစားခဲ့လျှင်, သင်သည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုကံကြောင့်မဖြစ်ပေမယ့်ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်ပစ္စည်းရွေးချယ်ရေးရှိမရှိ, သူတို့ကလက်တွေ့, ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်တဲ့ထုတ်ကုန်ဖန်တီးကြောင်းကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ နှင့်သဏ္ဌာန်, အပေါငျးတို့သရှန်ကျန်း Dituo အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှများ၏ဖန်တီးမှုသဘောထားကိုထုတ်ဖေါ်။ နှင့်ထုတ်ကုန်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်။ Dituo 2.4MHz တစ်ကြိမ်နှုန်းမှာဒဏ်ငွေအခိုးအငွေ့သို့ရေပြောင်း ultrasonic တုန်ခါမှုပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့်ထုတ်ပေးကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုကိုအသုံးပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူအသုံးပြုသောခံရပြီးနောက်ကအမွှေးအကြိုင်များ၏အပြည့်အဝလေအောင်ပတျဝနျးကငျြသောလေထုထဲတွင်ဖြန့်ဝေသည်။ အိမ်မှာလာရောက်လည်ပတ်ဧည့်သည်များရှိပါသည်တဲ့အခါ, ဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲမှာထားတဲ့အနံ့လည်းမရှိအခါ, Dituo အားဖြင့်ထုတ်လွှတ်အမွှေးအကြိုင်လေထဲမှာချက်ချင်းမွှေးစေနိုင်သည်။ မောအနံ့ကိုသင်ရနံ့ကုထုံများလှပသောလေထုထဲတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံကို, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့စိတ်ကိုလန်းဆန်းမသာ။ သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှုပ်နေနေ့ကအဆုံးသတ်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအပန်းဖြေဖို့လိုတဲ့အခါ, dituo ဖြစ်စေသောအမွှေးအကြိုင်သင်ဖြေလျော့ပေးခြင်းများနှင့်သက်သာခံစားရစေမည်ဆိုပါစို့။
အဆိုပါနှစ်သက်ဂီတစိတ်ဖိစီးမှုအောက်၌ရှိသမျှသောနေ့ရက်နေသောခေတ်သစ်လူတွေအပေါ်တစ်ဦးငြိမ်သက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အနံ့ပျံ့ဘလူးတုဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ဂီတကစားနိုင်ပါတယ်။ ဂီတဟာအနံ့နှင့်တွေ့ဆုံပြီးလျှင်, gradient ကိုအသက်ရှူအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအတွက်ရင်ခုန်စရာလေထုကလူမိုဃ်းတိမ်၏အာကာသအတွင်းလမ်းလျှောက်တူသောခံစားရစေသည်သောအခါ, လန်းဆန်းလေထုသာယာသောလေထုကထပ်ပြောသည်။ သငျသညျအိပ်မပျော်၏ပျော့ရောဂါလက္ခဏာအားဖြင့်လိုက်ပါသွားနေတယ်ဆိုရင်သင်အိပ်ခန်းထဲမှာရနံ့ကုထုံလုပ်နေတာသောအခါ, သငျသညျလာဗင်ဒါ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ add နိုင်ပါတယ်, နှင့်လတ်ဆတ်ကြော့အနံ့အိပ်မက်မက်ရန်သင့်အားအတူလိုက်ပါနိုင်ပါ။